Xubbinimadii Ruushka ee Guddi ka mida Q/Midoobay oo la joojiyey (Somaliya oo ka baaqsatay..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xubbinimadii Ruushka ee Guddi ka mida Q/Midoobay oo la joojiyey (Somaliya oo ka baaqsatay..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xeer ilaalinta oo sii deysay Gabadhii Soomaalida ee dishay Darawalka Reer Masar (Warbixin)
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka oo 3 Qodob kala hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh
Wiil 18 sano jir ah oo toogasho ku laayey 21 Caruur ah, isagiina la dilay (Sawirro)
Dowladda Sacuudiga xayiraad Duulimaad kusoo rogtay Soomaaliya iyo 15 Dal oo kale
Koox Qarsoon oo magaalada Tehran ku dishay Sarkaal ka tirsanaa ilaalada Kacaanka Iran
Farmaajo oo laga sagootiyey Villa Somalia iyo Ballanqaad uu siiyey Madaxweyne Xasan Sheekh
Taageerayaashii Farmaajo ee Baraha Bulshada oo weji cusub oo naxdin leh lasoo baxay
Farmaajo oo loo diyaariyey Guri ku yaalla Qeybta Mucaaradka ka degan yihiin Muqdisho
Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay Xasan Sheekh Max’ud..? (Akhriso Taariikhdiisa)
Sidee loo dilay Haweeneydii ahayd Weriyaha Aljazeera ee Dhulka Falastiin..? (Daawo)
Hanti-dhowrka oo baaritaan ku bilaabay Wasiirkii Arrimaha Dibadda ee shaqada laga joojiyey
Maxaa ka khaldan in Mahad Salaad loo ansixiyo Xilka Agaasimaha Hay’adda NISA..?
Imaaraadka Carabta oo Lacag ku dhow 10 Milyan Kaash ah ku wareejisay dowladda Somaliya
Maxaa ka jira in Xildhibaan Mahad Salaad loo magacaabayo Agaasimaha Hay’adda NISA..?
Musharax Madaxweyne Xasan Kheyre iyo Waxqabadkiisii Hannaanka Deyn Cafinta
Xubbinimadii Ruushka ee Guddi ka mida Q/Midoobay oo la joojiyey (Somaliya oo ka baaqsatay..)
Dalalka Itoobiya iyo Eritea oo Ruushka taageeray, kana hor yimid in la hakiyo xubinnimadiisa, halka Somaliya iyo Jabuuti aysan coddeyn.
Golaha Guud ee Q/Midoobay ayaa Khamiistii shalay u cod u qaaday qaar ay so odiyariyeen Reer Galbeedka oo lagu hakinayo xubinimada dawladda Ruushka ee Golaha Xuquuqda Aadamaha ee Q/Midoobay.
Go’aanka ayaa la xiriira xadgudubyada lagu eedeeyey in Ruushku uu ka geysanayo dalka Ukraine, waxaana codka loo qaaday in Ruushka laga joojiyo xubinnimada Golaha Xuquuqda Aadan taageeray 93 dal.
Waxaa diiday go’aanka joojinta, 24 dal oo ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Eritrea, Waxaana ka aamusay 58 dal. Halka dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti aanay kulanka ka xaadirin, wax codna ka dhiiban arrintan.
Golaha ayaa xubinimadii Ruushka u hakiyey arrimaha la xiriira “xadgudubyada waaweyn ee abaabulan ee xuquuqda aadamaha” iyo xadgudub dhinaca sharciga dawliga ah, oo lagu soo eedeeyay inuu Ruushku ka geystay dalka Ukraine.
In qaraarku meel maro waxaa loo baahan yahay labo meeloodow saddex, iyada oo dalalka ka aamusayna aan la tirineynin, taasoo keentya iuu dhaqan galo qaraarkaasi.
47 dal ayaa ku jira Golaha Xuquuqda Aadamaha oo xaruntiisu tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxaa cod qarsoodi ah ku doorta Golaha Guud ee QM. Ruushka waxa uu hadda ka mid ahaa golahaas oo 3 sano oo kasta doorasho loo galo. Xubinimada Ruushka ayaa dhamaaneysay 31ka bisha December ee sanadka dambe ee 2023.
Previous articleQoorqoor iyo xildhibaanno kusii jeeda magaalada Baydhaba iyo ujeedka socdaalkooda
Next articleDooda ku saabsan 4 kursi ee Guddiga FEIT Amray in Doorashadooda lagu noqdo (Qormo)
Weriye shaaciyey in loo magacaabay Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya
Askari ka mid ahaa ilaalada Gaarka ah ee Cumar Filish oo Muqdisho lagu dilay
24 ka mida Culimada Somaliland oo Baaq Culus kasoo saaray Xiisadda ka taagan Doorashada
Mas’uulkii fududeeyay Qarixii Diyaaradii Daallo Airlines oo Geeriyooday ( Sawirro)
Caaalimkii weynaa Sheekh Cali Warsame oo Geeriyooday iyo Mas’uuliyiin Tacsi u diray
Muuse Biixi oo ku socda xeeladihii Muddo kororsiga ee Maxamed Farmaajo (Akhriso)
Xasan Sheekh oo Madaxtooyada kula kulmay wafdigii ugu horeeyay ee heer Caalami
XOG: Wasiirkii labaad ee saaxiib la ahaa Farmaajo oo lagu helay Musuqmaasuq iyo Su’aal taagan
RW Rooble oo Sharci-darro ka dhigay isbedello uu sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda
Afar Kiis oo Farmaajo laga rabo inuu Xisaab-xiro inta aanu ka tegin Villa Somaliya (Xasaasi)
EXCLUSIVE May 22, 2022
Yaa noqon doona Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya..? (Qiimeyntii ugu danbeysay)
XOG: Codadka Farmaajo iyo Musharixiinta ay u wareegi doonaan xildhibaannada taageersan
EXCLUSIVE May 15, 2022